အလုပ်ရှာ..ရ..ခက်ပါသည်..။ ~ MSU Portal
5/05/2013 12:06:00 AM Navi Kyaw 1 comment
အင်ဂျင်နီယာဘွဲ့..ကို..ရဘို့..(၅)နှစ်လောက်ကြိုးစားခဲ့ရပြီး..အလုပ်မရတာ...ကို..စိတ်မနာတတ်ပေမဲ့..။ Pre Sea Engine တစ်လတက်ပြီး..သဘောင်္စက်ခန်းမှာ..အလုပ်မရတဲ့..အခါ..DMA နဲ့..SECD ..ကို..ထိုင်ဆဲ့..နေတာမျိုးကို.တွေ့တော့...နားလည်ရခက်ပါတယ်..။
အစိုးရအဆင့်ကို..ဆိုလိုပါတယ်..။ ဌာနဆိုင်ရာ အဆင့်..ကိုပြောခြင်းမဟုတ်ပါ.ဘူး..။
ဒီနှစ်မှာ..စက်မှုအင်ဂျင်နီယာဘွဲ့ရ..၊ ဘီအီးဒီဘွဲ့ရ..၊ ဘယ်လောက်ကျောင်းဆင်းလာမလဲ..၊ စက်ရုံအလုပ်ရုံနဲ့..စာသင်ကျောင်းအရေအတွက်က..ဘယ်လောက်တိုးချဲ့နိုင်မလဲ..၊ အလုပ်အကိုင်အသစ်..ဘယ်လောက်ပေါ်နိုင်လဲ..၊ နိုင်ငံတော်ရဲ့.ဘတ်ဂျက်အနေအထားက..ဘယ်လိုလဲ..၊ တိုင်းပြည်ရဲ့..မွေးဖွားနှုန်း..သေနှုန်းက..ဘယ်လိုလဲ..စတဲ့..အခြေအနေတွေ..ကိစ္စတွေကို..နိုင်းချင့်..စီမံပြီး... နိုင်ငံတော်အဆင့်..အမျှော်အမြင်ရှိ...ပညာတတ်..လူကြီးများက..နှစ်ရှည်စီမံကိန်းဆွဲပြီး..စနစ်တကျ..စီမံရတဲ့..ကိစ္စမျိုးပါ..။
ဆယ်တန်းအောင်ချက်က..ဘယ်လောက်..တက္ကသိုလ်တက်မဲ့..အရေအတွက်က..ဘယ်လောက်..ဘယ်ဘာသာရပ်ကို..ကျောင်းသား..ဘယ်လောက်...လက်ခံမယ်..၊ ဘယ်နှစ်ခုနှစ်မှာ..ဘယ်ဘွဲ့ရတဲ့..ကျောင်းသား..ဘယ်နှစ်ယောက်..ကျောင်းဆင်းလာမယ်..၊ ဆိုတာမျိုးကအစ..စနစ်တကျ..တွက်ချက်..ခန့်မှန်း..စီမံ..အကောင်အထည်ဖော်ရတာပါ..။ ဒါမှလည်း..အလုပ်လက်မဲ့..နှုန်းကို..ထိန်းချုပ်လို့ရမှာပါ..။
၀န်ကြီးတစ်ယောက်ပြောင်းလို့..၊ အရင်လူလုပ်ထားတွေ..နားလိုက်..၊ ငါ့မူအသစ်နဲ့..သွားမယ်ဆိုတာမျိုး..မလုပ်သင့်တဲ့..မလုပ်ရတဲ့..စီမံချက်မျိုးပါ..။ ဆယ်နှစ်..အနှစ်နှစ်ဆယ်..ရေရှည်စီမံကိန်းချပြီး..ပြည်တွင်းပြည်ပ..ပညာရှင်တွေနဲ့..ညှိနှိုင်းတွက်ချက်..တွေးဆ..ပြင်ဆင်ရတဲ့..အလုပ်မျိုးပါ..။ တိကျတဲ့..Statistic စာရင်းအင်းများအပေါ်မှာလည်း..အခြေခံရပါတယ်..။
နိုင်ငံရေး..၊ စစ်ရေး.၊ အုပ်ချုပ်ရေး..အမြင်ရှုဒေါင့်များကို..အလေးထားပြီး..ပညာရေး..အမြင်နဲ့..ရှုဒေါင့်က..ချောင်နားမှာ..ရောက်ခဲ့တာကလည်း..အားလုံးအသိပါ..။
DMA မှာ..ဒု-ညွှန်မှူးအနေနဲ့..လုပ်နေခဲ့တဲ့..၂၀၀၂ မှာ..ကျွန်တော်..On Loan နဲ့..သဘောင်္ပြန်လိုက်ဘို့..အလုပ်ရှာခဲ့ပါတယ်..။
Chief Engineer လက်မှတ်ရှိပါတယ်..။ Chief Engineer Service ရှိပါတယ်..။ လက်ရှိ..ရေကြောင်းဌာနမှာ..ထိုက်သင့်တဲ့..ရာထူး..ရှိပါတယ်..။
အလုပ်ရှာရတာ..မလွယ်ပါဘူး..။ ဆရာ..လို့..ခေါ်ပြီး..အလုပ်ခန့်ဘို့ကြတော့..ငြင်းကြပါတယ်..။ တောင်းလဲတောင်းချင်..တောင်းလို့လဲ.မကောင်းတော့..မခန့်တာမျိုးရှိသလို..။ Chief Engineer Service က..၂စီးဘဲ..ရှိလို့..နည်းလို့ဆိုပြီး..ငြင်းတာလည်း..ရှိပါတယ်..။ ကုမဏီ ၁၀ ခုကျော်ပါတယ်...။ အလုပ်မရပါဘူး..။ နှစ်လကျော်ကြာပါတယ်..။ နောင်..အလုပ်ပေါ်ရင်..အကြောင်းကြားပေးပါ့မယ်.. ဆရာလို့..ပြောပြီး..ကန်တော့ဆွမ်းလောင်းပါတယ်..။
တစ်ချို့..ကုမဏီများဆို..Agent နဲ့တောင်..၀င်တွေ့ခွင့်..မရပါဘူး..။ မအားလို့..၊ နိုင်ငံခြားဖုန်းပြောနေလို့..။ CV တင်ခဲ့ပါ..ဆိုတာမျိုးလည်း..ကြုံခဲ့ရဘူးပါတယ်..။
၀က်ဖြစ်မှတော့..မစင်ကြောက်လို့..မရဘူးလို့..နားလည်ပါတယ်..။ ကိုယ့်မာနကို..ခ၀ါချပြီး..သာမာန်..သဘောင်္သားတစ်ယောက်လိုဘဲ..အလုပ်လျှောက်ပါတယ်..။CV တွေ..တစ်ထပ်ကြီး..ကူးပြီး..လိုက်လျှောက်ပါတယ်..။ မရတော့လဲ..CV ထားပြီး..ပြန်ခဲ့ပါတယ်..။ နောက်၂လကျော်..အကြာမှာ..သူငယ်ချင်းမိတ်ဆွေ..တစ်ယောက်ကောင်းလို့..အလုပ်ရပါတယ်..။ ကိုယ်တွေ့ပါ...။
၂၀၀၇ မှာ..အလုပ်က..ထွက်ပြီး..သဘောင်္ပြန်လိုက်ဘို့..လုပ်ပါတယ်..။ အပေါ်က..အတွေ့အကြုံမျိုးကို..ဘဲ..ထပ်ပြီး..ကြုံရပြန်ပါတယ်..။
သဘောင်္လောကမှာ..အလုပ်အကိုင်ပေါများခြင်း..၊ ရှားပါးခြင်းက..၊ တလှည့်စီဖြစ်တတ်ပါတယ်..။ အလုပ်အကိုင်ရှားပါးတဲ့..အခါမျိုးမှာ..၊ အရာရှိကြီးများတောင်..အလုပ်အကိုင်ရဘို့..ခက်ပါတယ်..။
အခု..နှစ်ပိုင်းတွေမှာ..ရေကြောင်းလောက..သဘောင်္လောကမှာ..ပျက်ကပ်ဖြစ်နေချိန်မို့..အလုပ်ရှားပါတယ်..။ ဒီတော့..လူသစ်များ အတွက်..အလုပ်အကိုင်ရှားပါးမှာ..သဘာဝပါ..။
ကိုယ် English Skills ဘယ်လောက်ရှိလဲ..သုံးသပ်ပါ..လိုအပ်ရင်ဖြည့်ဆည်းပါ..။
ကိုယ့် Professional Skills ဘယ်လောက်ရှိလဲ..သုံးသပ်ပါ..လိုအပ်တာကို..လေ့လာ..သင်ယူပါ..။
ရိုက်ကြေး..ကိစ္စက.. Supply & Demand ပေါ်မှာ..အခြေခံပါတယ်..။
(၂) မြန်မာ..သဘောင်္သားများရဲ့..English Skills & Prefessional Skills အားနည်းလာတာလည်း..ပါပါတယ်..
(၃) မြန်မာ..သဘောင်္သားလူငယ်..(တစ်ချို့) ရဲ့..တာဝန်သိစိတ်..တာဝန်ယူစိတ်..လေ့လာသင်ယူလိုစိတ်..နည်းပါးတဲ့.. Mind set နဲ့
အလုပ်ကို..၀တ်ကျေတန်းကျေ..လုပ်တာ..၊ ဖျက်လိုဖျက်ဆီးလုပ်တာ..၊ တွေ..နိုင်ငံခြားကုမဏီ..တစ်ချို့က..ခံစားရလို့..
(၄) တရုတ်ပြည်က..သဘောင်္သားလောကမှာ..အလုံးအရင်းနဲ့..၀င်လာနေတာလည်း..ပါပါတယ်..။ အလုပ်အကိုင်အခွင့်
ကျောင်းဆရာလုပ်ရင်..မြေဖြူကိုင်ရမယ်..မြေဖြူမှုန့်..ပေနိုင်တယ်..။ ရှုရနိုင်တယ်.။ အဆုတ်ရော၈ါရနိုင်တယ်.. (မြို့ကျောင်းမပါ..)
စစ်ဗိုလ်လုပ်ရင်..သေနတ်ကိုင်ရမယ်..။ တိုက်ပွဲဝင်ရမယ်..။ အသက်စွန့်ရနိုင်တယ်..။ ကိုယ်လက်အင်္ဂါ..ဆုံးရှုံးနိုင်တယ်..။
သဘောင်္သားလုပ်ချင်ရင်..အလုပ်ရဘို့...စောင့်ရတယ်..စိတ်ရှည်ရတယ်..။ အလုပ်ရတော့လဲ.. အလုပ်ကြိုးစားရတယ်..။ လေ့လာသင်ယူရတယ်..။ အလုပ်ထဲမှာ..ဒုက္ခိတဖြစ်နိုင်တယ်..။ သေနိုင်တယ်..။ အလုပ်လုပ်ပြီး..လစာမရ..ဖြစ်နိုင်တယ်..။
ကျောင်းဆရာလုပ်ဖို့..ဘယ်သူမှ..အုန်းပွဲ..ငှက်ပျောပွဲနဲ့..လာပင့်တာမဟုတ်ဘူး..။ ကိုယ်ရွေးချယ်.တာ...။ ကိုယ့်ဖာသာ..အလုပ်လျှောက်ပြီး..ကိုယ့်ဖာသာအလုပ်ဝင်လာ..တာ..။
စစ်ဗိုလ်လုပ်ဘို့..အိမ်ကို..ဆင်နဲ့.ဝေါနဲ့...လာပင့်တာ..မဟုတ်ဘူး..။ ကိုယ့်ဖာသာ..အလုပ်လျှောက်ပြီး. ၀င်ခွင့်တွေဖြေ..ပြီး..ရချင်လွန်းလို့...ကိုယ့်ဖာသာရွေးချယ်..လှုပ်ရှားကြိုးစားခဲ့တာ..။
သဘောင်္သားလုပ်ပါ..ဆိုပြီး..DMA နဲ့..ရေကြောင်းဘက်ဆိုင်ရာ..နိုင်ငံတော်ကဖွင့်ထားတဲ့..ကျောင်းတွေက.အိမ်ကို...အတင်းလာခေါ်ပြီး..တက်..ခိုင်းထားတာ..မဟုတ်.ပါဘူး..။ ကိုယ်လုပ်ချင်လို့..ကိုယ့်ဖာသာ..ကိုယ်ရွေးချယ်ပြီး..လျှောက်လှမ်းလာခဲ့.ကြ..တာ.ပါ...။
အလိုမကျရင်..ဆဲမယ်..ကန့်လန့်တိုက်မယ်..ဖျက်လို..ဖျက်ဆီးလုပ်မယ်..ဆိုတဲ့..စိတ်မျိုးကလည်း..သဘောင်္သား..အလုပ်နဲ့..မကိုက် ညီပါဘူး..။ သင်္ဘောအလုပ်က..Team Work အလုပ်ပါ..။ သဟဇာတ..ဖြစ်အောင်..နေတတ်..စားတတ်..ဘို့..လိုပါတယ်..။ ထက်အောက်..အပြန်အလှန်..လေးစားတတ်ဘို့လည်း..လိုပါတယ်..။
အလုပ်အကိုင်..ရှာရခက်ပါတယ်..။ ကြန့်ကြာပါတယ်..။ ငွေကြေးလည်း..ကုန်ကျနိုင်ပါတယ်..။
နောက်တစ်ချက်ပြောချင်တာက.. သဘောင်္သားက..စာတတ်ရပါတယ်..။ စာဖတ်ရပါတယ်..။
အင်္ဂလိပ်စာ..Yes, No လောက်..တတ်ပြီး..အိုင်နိုး..ယူနိုး..နှစ်ယောက်နိုးတော့..သူခိုး..မခိုး..နိုင်တော့ဘူး..။ ဆိုတာမျိုးလောက်နဲ့..အရာရှိဖြစ်ချင်လို့..ရတဲ့..ခေတ်မဟုတ်ပါဘူး..။
Sea Time လေး..တစ်နှစ်..နှစ်နှစ်လည်း..ရရော..အင်္ဂလိပ်စာလည်းမတတ်ဘဲ..အရာရှိဖြစ်ချင်နေသူတွေ..ရှိနေလို့ပါ..။
ဖြစ်ချင်တာကို..မတားပါဘူး..။ ဖြစ်ချင်ရင်..ဖြစ်အောင်..ကြိုးစားပါ..။ တကယ်လုပ်ရင်..ရပါတယ်..။
ဒါပေမဲ့.. ဖြစ်ချင်တာ..တစ်ခုထဲနဲ့..ကြိုးလည်းမကြိုးစားဘဲနဲ့..လိုဘ..မပြည့်ရင်..ဆဲနေတာမျိုးကတော့..ဖြစ်သင့်မသင့်..၊ စာမေးပွဲတွေ..တန်းချပေးပါ..။ တန်းလုံးကျွတ် အောင်အောင်လုပ်ပေးကြပါဆိုတာတွေက..လွဲမှားတဲ့..အတွေးတွေပါ..။
Quantity Control ကို..ဦးစားပေးခဲ့တာကြောင့်..ခေါ်သူနည်းနေရတဲ့..ကြားမှာ..Quality လျော့ခိုင်းတာက..ရေရှည်မှာ..ဆိုးကျိုးကိုဘဲ..ပေးမှာပါ..။
May 5, 2013 at 5:51 PM Reply